Nagu saabsan - Shenzhen Hengxing Mashiinka Mashiinka Co., ltd.
Shenzhen Hengxing Mashiinka Mashiinka Co., ltd. oo la aasaasay 2011, waa soo saare xirfadle ah oo ku hawlan cilmi baaris, horumarin, soo saar, iibin iyo adeeg ah tuubbada ultrasonic iyo mashiinka wax lagu xiro, mashiinka wax lagu xiro, mashiinka wax lagu buuxiyo ee plasitc iyo mashiinka wax lagu xiro, mashiinka wax lagu duubto ee wajiga, mashiinka alxanka balaastigga sare, ultrasonic Mashiinka alxanka balaastigga ah, Mashiinka sameynta faakiyuumka caaga ah, mashiinka wax lagu xiro fin, mashiinka wax lagu duubo oo yaraada, iwm
Mashiinnada wax lagu duubo ee 'HengXing' waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qurxinta, dawooyinka, cuntada, caagga iyo warshadaha kale. Badeecadaheena badankood waxay heleen shahaadooyinka CE iyo RoHS.
Hengxing waxaa ka go'an horumarinta tiknoolajiyada 'ultrasonic,' oo isku daraysa tiknoolajiyada otomaatiga ah ee leh tiknoolajiyada ultrasonic si dhammaystiran mashiinka wax lagu dhejiyo tuubada caagga ah, ka soo kabashada dhibaatooyinka xirmooyinka kulul ee dhaqameedka, samee nidaam wanaagsan oo adag. Iyada oo loo marayo dadaalka joogtada ah ee kooxdayada farsamada, waxaan helnay lambarro shahaadooyin patent ah, oo horseed u ah isbeddellada teknolojiyadda ultrasonic ee baakadaha iyo mashiinnada alxanka.
Hengxing, oo leh koox qiiro iyo khibrad leh, ayaa had iyo jeer la heli karaa si ay u falanqeeyaan shuruudahaaga oo ay kuu siiyaan xalalka ugu wax ku oolka badan oo ay kuugu soo noqdaan waqtiga. Sanadihii la soo dhaafay, shirkadeena waxay soo saartay mashiinka tuubbada laba qol, hoyga mashiinka monodoze iyo balaastigga balaastigga ah iyo mashiinka wax lagu xiro ee loogu talagalay warshadaha qurxinta. Hengxing had iyo jeer wuxuu si dhow ula socdaa isbedelka suuqa.
Kooxda R & D ee adag, nidaamyada tijaabada adag, samaynta qalab tayo sare leh.
Wanaagsan samaynta qayb farsamo, oo loogu talagalay faahfaahin kasta, ka dhigaysa qalabka mid deggan.
Keenida kalsooni iyo dheef, sii macaamilka ku qanco hadafkeenna.